Sokratis Papastathopoulos Child Story Plus Unold Biography Facts
Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Sokratis Papastathopoulos Child Story Plus Unold Biography Facts
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye kasị mara aha "Papa". Anyị Sokratis Papastathopoulos Child Akụkọ na Ịkọwapụta Biography Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe omume dị ịrịba ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge. Nyocha a gụnyere ndụ nwata ya, ndabere ezinụlọ, akụkọ ndụ tupu aha ya, ebili na akụkọ a ma ama, mmekọrịta na ndụ onwe onye.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ bụ Ụlọ elu nchebe Gris. Otú ọ dị, ọ bụ nanị mmadụ ole na ole na-atụle Sokratis Papa's Biography nke na-akpali mmasị. Ugbu a n'atụbeghị ọganihu, ka anyị malite.
Sokratis Papastathopoulos Child Story Plus Unold Biography Facts-Ndụ mbido
Sokratis Papastathopoulos, nke amara aha Sokratis bụ onye a mụrụ na 9th ụbọchị nke June 1988 nne ya (aha a na-amaghị), na nna, Charalambos Papastathopoulos na Kalamata, Gris. Sokratis tolitere na Kalamata bụ obodo nke abụọ kachasị ama na Southern Greece.
"Dịka nwatakịrị, ọ dịghị ihe eji egwuri egwu ma ọ bụ egwuregwu, ọ bụ nanị football." O kwuru otu oge.
Ná mmalite, ọ bụ Sokratis na-ekere òkè na football nke mere ka ọ ghara ịhọrọ ọrụ ndị ọzọ dị ala. N'ịbụ onye tolitere n'otu obodo ebe izu efu na-agwụ mgbe football nọ n'ụkwụ ya, ọ dị mfe ka Sokratis na-eto eto kpuchie ọchịchọ ya ịghọ ndị ịgba egwu ọkachamara
Sokratis Papastathopoulos Child Story Plus Unold Biography Facts- Ndụ Ndụ Mmalite
Ọchịchọ nke Sokratis maka football mere ka ọ debanye aha na otu akwụkwọ ntorobịa nke mpaghara, Aiantas Kalamatas onye nyere ya ebe a iji gosi talent ya. N'oge ahụ, ọ bụ nwata a dị umeala n'obi na onye na-ahapụ ya bụ onye nwere ike ijikwa bọl karịa ndị ibe ya. Ọ dịghị oge tupu ọchịchọ ya amalite ịmalite. Sokratis n'inwe ọganihu iji nwee ọganihu ga-enwe ike ịkwaga otu òtù ndị Gris ọzọ aha ya bụ Apollon Petalidiou.
Inye aha mbụ ya na akwa: N'oge ahụ, Sokratis mere mkpebi nke inwe aha ya 'Sokratis'n'azụ uwe elu ya n'ihi aha nna ya'Papastathopoulos'nke dị ogologo iji dabara. Maka aha njirimara, ọ nakweere aha 'Papa'.
Sokratis Papastathopoulos Child Story Plus Unold Biography Facts- Ụzọ Ebube
Dị ka nwa okorobịa na-eto eto, ihe niile Sokratis chọrọ bụ nnukwu ọrụ na-arụ ọrụ. N'oge ahụ, ọ bụ maka agha ahụ ka ọ kwụsị ọrụ ntorobịa ya na ụlọ ọgbakọ Gris. Ochicho a mechara hu ahihia nke oma ka Sokratis nwere onye nduzi nke ihe omimi nke football aha nke anakpo Toni Savevski.
Toni bụ maka inye aka Sokratis sonyere AEK Athens mgbe ya na ụlọ klọb na-aga nke ọma na ọnwa nke ọnwa 2005.
Sokratis na-achọ ụzọ ị ga-esi kwụọ ụgwọ na ọ gaghị emechu ya aka. O mezuru nkwa ya na mbụ ya maka AEK site n'ịgụ na nkeji nke asaa nke egwuregwu ahụ.
Sokratis Papastathopoulos Child Story Plus Unold Biography Facts- Grik nke 2004 Grik
Ị maara? ... Sokratis so n'ime ndị na-agba ọsọ na-eto eto ndị na-eto eto bụ ndị ghọrọ ndị na-ese egwuregwu na Europe niile. Nke a mere mgbe mba ya Gris meriri 2004 European Championship nke Portugal kwadoro.
Ọbụna ị gbanwere mgbakọ football nke Gris n'oge Sokratis, ọ ka na-erite uru mgbe otu onye na-agụ akwụkwọ 4 nke Ịtali gafere ya mgbe ya na Genoa jikọọ ya. Ọ bụ ezie na ọ bụ naanị 18 n'oge ahụ, Sokratis mere ọtụtụ ohere ya iji gosi onwe ya dị ka ebe mbụ-nhọrọ n'etiti-azụ. Njirimara a mere ka AC Milan zụọ ya.
Mgbe ọ na-egwu nanị 5 na Milan, Sokratis gbapụtara na Germany mgbe ya enweghi ike ịlụ ọgụ na Nesta, Zambrotta na Thiago Silva. Ọ hụrụ ndụ ka mma na Germany ma kpebie ịchọta ebe ga-aga n'ihu na Werder Bremen mgbe ọ gwụsịrị ọmarịcha egwuregwu na mbinye ego.
Sokratis Papastathopoulos Child Story Plus Unold Biography Facts- Ọgụ na German Lift
Kpọmkwem na 16th nke April 2012, a mara ọkwa na Sokratis ga-eso Bremen na-adịgide adịgide. Otú ọ dị, oge 2012-13 adịghị mma maka ụlọ ọrụ ahụ. Nanị mgbalị nke Sokratis agaghị ezu iji mee ka ndị agha ya kwụsị ịlụ ọgụ.
Na March 2013, n'etiti agha a na-ebuso agha ma na-enwe oké esemokwu, Sokratis nwere onwe ya na nkwonkwo ọzụzụ na onye otubu ibe ya Marko Arnautović. Lelee vidio nke iwe ọkụ n'okpuru.
Borussia Dortmund hụrụ ohere na njedebe n'etiti abụọ ahụ ma kpebie ịga mgbe onye agbachitere ahụ. Na 24 May 2013, echi nke ikpeazụ 2013 Champions League Njedebe n'etiti Bayern Munich na Borussia Dortmund, Sokratis kwusiri nde 9.5 nde na Dortmund. Mgbe ọ bịanyere aka n'akwụkwọ ahụ, o kwuru banyere ndị ahịa, sị,
"Ego anaghị etinye aka na mkpebi m ịbanye Dortmund. Ọdịnihu m bụ ihe niile dị mkpa, ekwenyekwara m na m mere mkpebi ziri ezi. "
Sokratis Papastathopoulos Child Story Plus Unold Biography Facts- Bilie na-ewu ewu
Ị maara?... Ihe abuo nke mere ka Sokratis bilie elu. Nke mbụ bụ 2014 World Cup na Brazil. Ekele ya arụ ọrụ dị egwu n'egwuregwu ahụ, Sokratis mesịrị dee onwe ya n'ime akwụkwọ akụkọ ihe mere eme nke otu mba n'oge asọmpi ahụ.
Nke a bụ oge ụlọ elu Gris na-eduga ìgwè ya ka ha gaa akwụkwọ-ebe dị gburugburu nke 16 maka oge mbụ na akụkọ ihe mere eme ha.
Mmetụta Dortmund: Ihe ọzọ mere ọ ga - eji buru aha ya bụ ihe ngosi ọkwá ya maka òtù egwuregwu ndị Germany. Sokratis afọ mbụ ya na Dortmund nwetara ụgwọ ọrụ ya na nhọrọ ya na XI kasị mma nke 2013-14 Bundesliga mgbasa ozi. Ọ bụghị naanị nkọwa Dortmund nchebe nke dakwasịrị ya, kamakwa ọgụ ahụ dị na vidiyo dị n'okpuru ebe a.
Mgbe Jürgen Klopp's ọpụpụ, Sokratis ka nọgidere bụrụ onye ndú na-enweghị atụ na BVB nche ruo 2 July 2018 mgbe ọ ghọrọ obi nke Unai Emery nchebe.
Sokratis Papastathopoulos Child Story Plus Unold Biography Facts- Ndụ mmekọrịta
N'okpuru nwoke ọ bụla nwere ọganihu, e nwere nwanyị. Maka ndị na-agba ọsọ, e nwere nnukwu efere dị ka a hụrụ na Xanthippi Stamoulaki.
Sokratis na Stamoulaki nwere nwa nwanyi aha ya bu Pap Papadathopoulou.
Sokratis Papastathopoulos Child Story Plus Unold Biography Facts- Ezigbo Ndụ Onye
Sokratis bụ onye ihere ma dị ala. Ọ gaghị esonye n'etiti ndị na-agba ọsọ a ma ama bụ ndị a ma ama maka iji ụgwọ ọrụ mmesapụ aka ha na-egwuri egwu.
Ị maara?…N'oge na-adịghị anya mgbe ị bịanyere aka n'akwụkwọ maka Dortmund, Sokratis tụrụ onye ọ bụla anya site n'ịgbanye ọzụzụ na Fiat 500 dị ala, ụgbọ ala ahụ na - Ngolo Kante.
Nyochaa: Daalụ maka ị gụọ Sokratis Papastathopoulos Child akụkọ ya na akwụkwọ akụkọ efu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịdị mma. Ọ bụrụ na ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.
Bernd Leno Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Mohamed Elneny Nwatakịrị Akụkọ Akụkọ Na-adịghị Agbanwe Ihe
Bọchị agbanwee: February 9, 2018